सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार,ब्यावसाय? बन्दुक बोक्ने कि मन्त्री,नेताको ब्रिफकेस? - Malayakhabar
Home देश सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार,ब्यावसाय? बन्दुक बोक्ने कि मन्त्री,नेताको ब्रिफकेस?
सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार,ब्यावसाय? बन्दुक बोक्ने कि मन्त्री,नेताको ब्रिफकेस?
बिहीबार,१ जेष्ठ २०७७ ००:१८
त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ ।
[ यो खबर आजको नयाँ पत्रीका दैनिकबाट लिइएको हो ]
Previous articleनेपालीहरु समस्या लिएर आएमा समाधान NRNA मलेसियाले गर्छ:अध्यक्ष हरि भट्टराई।
Next articleदक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुम्ने/नेपाली पनि प्रभावित।
आरएन चौधरी थारु - बिहीबार,१ जेष्ठ २०७७ ००:१८
समाचार डेस्क-मलाया खबर - बिहीबार,१ जेष्ठ २०७७ ००:१८
Malaya Khabar - बिहीबार,१ जेष्ठ २०७७ ००:१८